‘भष्मासुर ओलीलाई असारमै ठेगान नलगाउँदा प्रचण्ड-माधव आज सडकमा बस्नुपर्यो’: बाबुराम भट्टराई (भिडियो सहित) -
‘भष्मासुर ओलीलाई असारमै ठेगान नलगाउँदा प्रचण्ड-माधव आज सडकमा बस्नुपर्यो’: बाबुराम भट्टराई (भिडियो सहित)
VoiceNp	प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १२, २०७७ समय: २२:१३:५२
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भष्मासुरको संज्ञा दिँदै असारमै ठेगान नलगाउँदा अहिलेको संकट आएको बताएका छन् । आइतबार पार्टीले काठमाडौंमा गरेको विरोध प्रर्दशनका क्रममा बोल्दै उनले प्रचण्ड माधव नेपालले ओलीलाई असारमै ठेगान नलगाउँदा अहिले सडकमा बस्नुपरेको उल्लेख गरे ।
संसद विघटन कसैको लहडमा नहोस भनेर पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक निर्वाचित सांसद राख्न प्रस्ताव गरेपनि कसैले नमानेको र संसद विघटन नहोस भनेरै धारा ७६ राखिएको उल्लेख गरे । बुद्धिजिवी भनिएका र केही पत्रकारहरुले बेलायतको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछन् भनिरहेकोमा बेलायतमा पानी पर्यो भने छाता ओड्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । बेलायतमा दुई तीन सय संसदीय अनुभव रहेको र बेलायतको उदाहरण हेरेर नै संसद विघटन गर्न नसक्ने प्रावधान राखेको उनले बताए ।
उनले भने– ‘बहुमत प्राप्त सरकारले संसद विघटन गर्न सक्दैन । पार्टी फुटेर बहुमत नभए ओलीले काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था थियो । काँग्रेससँग मिलेर पनि बहुमत सरकार बनाउन नसकिने अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त त्यस्तो अवस्था नै रहेन ।’
संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधीको हातमा सत्ता पुगेका कारण इतिहास दोहोरिएको उनको भनाई छ । चुनाव घोषणा गर्ने अनि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाइन्छ ? भन्दै आफू प्रधानमन्त्री भएका बखत संविधानसभा भंग भएका बेला ८ मन्त्रालय खाली राखेर काम चलाउन सरकार चलाएको स्मरण गरे ।
चुनाव घोषणा गर्ने अनि मैले जे गरेपनि हुन्छ भनेर सडकबाट मान्छे टिपेर मन्त्री बनाउँदै संविधानमा नभएको अभ्यास गरेको उनले बताए । उनले प्रश्न गरे– ‘कोरोनाको यस्तो महामारीमा चुनाव गर्ने बेला हो ? अहिले सरकारले कोरोना परीक्षणदर घटाएको छ, कम भएको देखाइरहेको छ ।
कोरोना अहिले नयाँ रुपमा आइरहेको छ, अहिले कोरोनाभन्दा ५६ प्रतिशत छिटो सर्ने नयाँ भाइरस आइरहेको छ । अरु देशले भ्याक्सिन लगाउन थालिसके । हाम्रोमा फेरि चुनाव गर्ने हो भने ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्छ । बेरोजगारी बढेको छ । त्यता खर्च गर्ने हो कि चुनावमा खर्च गर्ने हो ?’ डा.भट्टराईले संसद जिउँदो रहेकोले सभामुखले संसद बैठक बोलाउन सक्ने उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।